Posted by လမင်း | October 30, 2008, 5:27 pm
Posted by khinpyi | December 20, 2008, 9:16 am
မော်ဒယ်လ်တွေလည်း လန်း ဓာတ်ပုံဆရာလည်း လန်းပါတယ်။ ဟဲဟဲ မုန့်စားချင်လို့… (အသစ်ရှိလည်း တင်ပါဦး အားပေးနေပါတယ်)
Posted by လင်းအာရုဏ် | March 23, 2009, 9:32 am
မြန် မာ မ အမျိုး သမီး တွေ အနေ နဲ့ ကော မြန် မာ ပြည် အနေ အ ထား နဲ့ ကော အ ချိုး မကျ တဲ့ ပုံ တွေ ပဲ နော်။ ဖန် တီး သူ တွေ အနေနဲ့ ဘယ် လို လူ တန်း စားအ တွက် လဲ တော့ မသိဘူး ကြည့် ရ တာ တစ် မျိုး ပဲ ။ ပုံ တွေက တော့ ကြည့် ရ တာ တော် တော် ကောင်း ပါတယ်။ ဓါတ်ပုံ ပညာ တော့ နား မလည် ပါ ။ အား ပေး လျက် ပါ။
Posted by ခခ | May 2, 2009, 9:14 am
မော်လ်ဒယ်တွေရဲ့ လူပ်ရှားမှုတွေကို မလွတ်တမ်းရိုက်ပြနိုင်ပါတယ်..ဒါမျိုးပို့စ်တွေက အပျော်တမ်းရိုက်ဖို့မလွယ်ပါဘူး..မြင်တတ်ပါတယ်
Posted by ayechan | May 8, 2009, 3:07 pm
Posted by မိုးနေ | June 2, 2009, 6:34 pm
ကောင်းတယ်။ အရမ်းမိုက်တယ်။ ကင်မရာမန်း တော်တယ်။
Posted by mintunkyaw09 | June 11, 2009, 9:30 am
ဒါလည်းမှတ်တမ်းရှည်ရေးဖို့ အစီအစဉ်ထဲက subject တစ်ခုလား ။
Posted by Poisonrose | August 14, 2009, 5:49 am
As usual Moe Hay Ko looks good..
Posted by ကိုကြီးသာ | September 2, 2009, 3:52 pm
ဓာတ်ပုံလေးတေကွ တော်တော်ကောင်းတယ်ဗျာ…. ကျွန်တော်တို့ http://www.myanmarlensman.com ကိုလဲ ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ဗျာ မြန်မာဓာတ်ပုံချစ်သူများ၊ ၀ါသနာရှင်များ၊ ပညာရှင်များ… စုဝေးရာ နေရာလေး တစ်ခုပါ :)
Posted by Phil Kyaw | October 16, 2009, 7:41 am
Posted by maychin | December 10, 2009, 11:17 am
Posted by မျိုးချစ် | December 30, 2009, 11:25 am
Posted by zayar | February 2, 2010, 6:51 am
ဓါတပ်ပုံ ပညာရှင် ရဲ့ အဆင့်ကို ခန်းမှန်းလို့ရပါတယ်အလားတူဘဲမြန်မာ ဒီဇိုင်နာ တွေရဲ့ အရည်အချင်းက အဆင့်မှီပါတယ် -စီးပွါးရေး တိုးတက်လာတာနဲ့ အတူ ပြောင်းလဲလာတဲ့ ၀တ်စားဆင်ယင်မှုကိုတော့ ဘယ်လိုမှ တားလို့ရမယ် မထင်ပါဘူး
Posted by အေးငြိမ်းသူ | February 21, 2012, 5:50 pm
ဓါတ်ပုံတွေအားလုံးကို သေသေချာချာကြည့်ပြီးဝေဖန်ပေးရရင် … ဓါတ်ပုံတွေအကုန်လုံးကောင်းပါတယ်……အထူးသဖြင့် လှုပ်ရှားနေတဲ့ပုံတွေကို အမိအရ (အပိုအလိုမရှိ) ရိုက်ထားတဲ့ပညာကိုတော့ တော်တော်လေးစားပါတယ်… ရိုက်နည်းလေး(အယူအဆလေး)တွေသိခွင့်ရမယ်ဆိုရင် တော့ တင်ပေးပါဦး..ဖက်ရှင်ပိုင်းကတော့ သိပ်နားမလည်လို့ မဝေဖန်တတ်ဘူး…. …………………
Posted by aung min (aunglantar) | September 17, 2012, 2:51 am
Posted by myant kin | October 5, 2012, 1:05 pm
Posted by myant kin | October 5, 2012, 1:10 pm
ဓါတ်ပုံတွေကတော့ အရမ်းမိုက်တယ်ဗျာ ကျွန်တော်လည်း ဓါတ်ပုံပညာကို လေ့လာနေလို့ ဓါတ်ပုံပညာလေးတွေကိုလည်း ဝေမျှပေးစေချင်ပါတယ်
Posted by ထွန်းထွန်းမင်း (ရွှေဘို) | November 29, 2012, 3:00 pm